Ireo fambara fa mampirafy izy…
Misy fambara ety ivelany ve rehefa mampirafy ny lehilahy? Ahoana no hahafantarana? Misy azo hamantarana azy tokoa. Ireto mantsy no matetika miseho rehefa mampirafy ny lehilahy :
Nisaraka dia mifamerina, ahoana no hamerenana ny tokantrano ?
Na mafy tahaka ny inona aza ny fifamaliana teo am-pisarahana dia mety mbola hifamerina ihany ny olon-droa.
§ Aza saro-piaro :
Mety ho lasa poizina ho an’ny fiarahana ny hasarotam-piaro. Misy karazany roa ny hasarotam-piaro. Misy ilay somary malefaka, mandalo, izay tsy dia olana loatra fa misy ilay karazany faharoa kosa izay mitoetra maharitra. Izany mantsy no mitarika anao hiahiahy ny olon-tianao. Raha vitanao dia ezaho tsy rarahiana mihitsy izay tsy fantatrao rehetra momba ny olon-tianao mba tsy hahatonga anao ho diso saropiaro aminy.
§ Mahaiza mametraka fetra :
Tsy hoe : rehefa tia dia hanaiky izay rehetra atao na lazain’ny olon-tiana akory. Raha misy zavatra teneniny na ataony tsy mety aminao dia aza matahotra ny miteny aminy izany. Raha tena tia anao izy dia hanaja ny safidinao sy ny fomba fijerinao na dia tsy mitovy hevitra aza ianareo. Aza mitratrevatreva kosa rehefa maneho ny hevitrao fa hazavao amin’ny fo tony sy fomba tsotra izany.
§ Mikolo ny endrika ivelany
Ny fahazoana olon-tiana tsy midika mihitsy fa tsy tokony hikarakara tena sy vatana intsony. Mifanohitra izany mihitsy aza no tokony ho izy. Ny vady mantsy jerijery hoy ny fitenenana, ny tovovavy tsara tarehy izay mety ho fakam-panahy koa betsaka. Ilaina ny mikolo ny tena manokana, manao izay mampetipety foana.
§ Aza mifankahita foana :
Fandrika be, indrindra ho an’ny mpifankatia vao miaraka ny mifankahita foana. Ho mora hifankaleo mantsy ianareo na koa ho lasa miankin-doha aminy. Ilaina ny manelanelana ny fotoana hifankahitana mba hisy tsirony hatrany ny fiarahana.
§ Aza ariana ny namana :
Fandrika manaraka izay be mpanao ny mifantoka tanteraka amin’ny olon-tiana hany ka tsy manam-potoana hatokana ho an’ny namana intsony. Hadisoana izany satria ny namana no hizaranao ny manta sy ny masaka. Izy ireo no hanavotra anao raha sanatria ianao misaraka amin’ny olon-tianao. Ilaina ny manokana fotoana ho azy ireo hatrany. Tsy hahatonga anao hiankin-doha loatra amin’ny olon-tianao koa izany.
§ Manàna tetikasa iraisana :
Mba haharitra ny fiarahana dia tsara ny manana tetikasa iraisana. Mety hoe : zavatra atao miaraka, azo resahina ao anatin’izany koa ny hiteraka any aoriana, hanao trano rehefa vita mariazy ohatra…
§ Tsy voatery hiteny azy ho “tiako ianao”
Ny tena zava-dehibe indrindra dia tsy mifehy be loatra ny olon-tiana. Ilaina ny mitazona mistery mba hahatonga azy ho liana aminao hatrany. Manàna fiainana ankoatra ny fiainanao miaraka aminy amin’izay tsy mifantoka be loatra aminy. Farany, tsy voatery hiteny aminy hoe : tia azy fa ny fihetsika ataonao dia ampy hanehoana izany.